iPad 2022 တွင် A14 ပရိုဆက်ဆာ၊ 5G နှင့် WiFi6ပါရှိမည်ဖြစ်သည်။ 2023 ခုနှစ်အတွက် ဒီဇိုင်းသစ် | iPhone သတင်း
iPad 2022 တွင် A14 ပရိုဆက်ဆာ၊ 5G နှင့် WiFi6ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ 2023 ခုနှစ်အတွက် ဒီဇိုင်းအသစ်
Louis padilla | | အိုင်ပက်, NOTICIAS
ဒီနှစ်ကုန်မှာ Apple ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး မော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ iPad 10 ကို ဒီနှစ်ကုန်မှာ ရရှိတော့မှာပါ။ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအတွက် အပြောင်းအလဲများကို သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး တူညီသော ဒီဇိုင်းကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်- 5G ချိတ်ဆက်မှု၊ A14 ပရိုဆက်ဆာနှင့် WiFi 6.
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ၎င်း၏အကြီးကျယ်ဆုံးအသစ်အဆန်းများကြားတွင် 5G ချိတ်ဆက်မှုပါဝင်မည့် iPad Air နှင့်ပတ်သက်သည့် ကောလာဟလများ (ဤအချက်တွင် အရာအားလုံးသည် စပိန်လိုနိုင်ငံများတွင် သရုပ်ဖော်နေဆဲဖြစ်သည်) ၎င်း၏ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် ဖန်သားပြင်ကဲ့သို့သော အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများတွင် ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ၊ OLED နည်းပညာအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း ၎င်းသည် ယခုအချိန်အထိ LCD မျက်နှာပြင်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပုံရပြီး ယခုအခါ Apple range တစ်ခုလုံး၏ အခြေခံအကျဆုံး iPad ဖြစ်သည့် iPad 10th generation သို့မဟုတ် iPad 2022 နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပါသည်။ . 2022 နှစ်ကုန်တွင် မျှော်မှန်းထားသော ဤတက်ဘလက်အသစ်သည် ပြည်တွင်းသတင်းများဖြစ်သည့် သတင်းများကို ယူဆောင်လာဖွယ်ရှိသည်။ A14 ပရိုဆက်ဆာသည် ၎င်း၏အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးရှိ iPhone 12 နှင့် တူညီသည်။ဒေတာချိတ်ဆက်မှုရှိသည့် မော်ဒယ်များတွင် 5G ချိတ်ဆက်မှု၊ နှင့် WiFi 6၊ Apple သည် ၎င်း၏စက်ပစ္စည်းများအားလုံးတွင် တဖြည်းဖြည်းထည့်သွင်းထားသည့် ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုစံနှုန်းအသစ်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ 2023 ခုနှစ်ကျမှ ရောက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ တက်ဘလက်ရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်း အပြောင်းအလဲပါ။ဤ "စျေးပေါ" iPad သည် အခြား iPad၊ Air၊ Mini နှင့် Pro တို့ရှိပြီးသား ဒီဇိုင်းကို ပင်မခလုတ်မပါဘဲ ကျဉ်းမြောင်းသောဘောင်များဖြင့် အမွေဆက်ခံမည့်ရက်စွဲ။ အခြားတိုးတက်မှုများရှိနိုင်ပါသလား။ အသုံးပြုသူများစွာမျှော်လင့်ထားသည့်အရာမှာ ဖန်သားပြင်နှင့် ဖန်သားပြင်ကြားတွင် နေရာလွတ်မရှိခြင်း၊ ဤ entry-level iPad တွင်သာ ဖြစ်ပေါ်သည့်အရာဖြစ်ပြီး ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေသည့်အရာဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ဤစခရင်အမျိုးအစားသည် ရှေ့မှန်ကွဲသွားသောအခါတွင် ပြုပြင်ရန် များစွာစျေးသက်သာပါသည်။ စခရင်တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤ iPad အသစ် 2022 ၏စျေးနှုန်း။ မပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ပက် » iPad 2022 တွင် A14 ပရိုဆက်ဆာ၊ 5G နှင့် WiFi6ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ 2023 ခုနှစ်အတွက် ဒီဇိုင်းအသစ်
Nanoleaf Lines၊ စမတ်မီးလုံးအသစ်များသည် အခြားသူများနှင့် မတူပါ။
Battle Cats Lunar New Year Event သည် အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ၊ အထူးမစ်ရှင်များနှင့် အခြားအရာများကို ပေးဆောင်သည်။